Mandà Ny Tolo-dalàna Hamaritana Ny Refin’ny Fahantrana i Singapour · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2013 20:06 GMT
Sary avy ao amin'ny pejy Facebook-n'ny ‘Singaporeans Against Poverty’ (Mponin'i Singapour Manohitra ny fahantrana).
Mety ho Singapour no tany manan-karena indrindra eran-tany kanefa niakatra izay tsy izy ny isan'ireo tokantrano mahantra monina ao amin'ity tanàn-dehibe feno fandrosoana ity, taona vitsisitsy izay. Mba hampiharihary ny fitaran'ny fahantrana ao Singapour, dia nanatontosa ny ‘Singaporeans Against Poverty’ ny vondrona Katolika Caritas:
Ny ‘Singaporeans Against Poverty’ dia fanentanana iray izay mikendry ny hahatonga saina ny olona momba ny fahantrana ao Singapour. Izany dia niainga tamin'ny fahatsiarovantenantsika momba ireo milomano anatin'ny fahantrana ao Singapour, na dia eo aza ny fahombiazany ara-toe-karena.
Namoaka lahatsoratra, sary, ary horonantsary maro ilay vondrona, izay mampiseho miharihary ny elanelana misy eo amin'ny manan-karena sy ny mahantra ao Singapour. Ireto ambany ireto misy horonantsary roa avy ao amin'ny YouTube izay manaitra ireo mponina ao Singapour mba ho tonga saina sy hiara-hientana momba ny fiakaran'ny fahantrana eo amin'ny fiaraha-monina:
Namintina ny hafatra tao anatin'ny fanentanana i Bertha Henson:
Karazana hafatra inona moa ity? Natao hampahafantatra ny olona ity fa misy vahoaka mahantra aty aminay, izay tsy mba mitaraina akory momba ny vidinà fiara sy trano noho ny fieritreretany ny sakafony manaraka.
Tsy nisy fisalasalana akory ity manam-pahaizana iray nanambara tamin'ny 2001 fa efa nihena ny fahantrana tao Singapour. Nanoratra i Kishore Mahbubani:
Tsy misy olona tsy manan-kialofana, mahantra na maty noana ao Singapour. Efa foana ny fahantrana, tsy tamin'ny alalan'ny lalàna (izay tsy ahitàna na inona na inona) fa taminà fiaraha-miasa teo amin'ny governemanta, vondron'olom-perenena, ary vondrona mpanao asa an-tsitrapo.
Kanefa lahatsoratra iray nosoratan'i Roy P no naneho fa mbola olana ao Singapour ny tsy fananan-kialofana:
…mbola sarotra ny mieritreritra hoe fa nahoana no mbola misy olona tsy manan-kialofana sy matory eny an-dàlana, na dia efa tratrantsika aza ny laharana voalohany eran-tany, eo ihany koa ireo ezaka be dia be natao nandritry ny taona maro. Araka ny nambarako, dia mampiomehy ihany ilay hoe matanjaka ara-toekarena nefa mampiharihary ny elanelana misy eo amin'ny manan-karena sy ny mahantra, ary ao anatin'izany dia miha-mahantra hatrany ireo mahantra.
Nandritra izany dia nolavin'ny Minisiteran'ny Fampandrosoana ny Ara-tsosialy sy ny Fiainam-pianakaviana ilay tolo-dalàna mamaritra ny fahantrana na ny fametrahana ny refin'ny fahantrana:
Tsy maneho ny maha-goavana sy maha-sarotra ireo olana sedrain'ireo ankohonana mahantra ny refim-pahantràna, izay mety ampian'ny tsy fahasalamana, tsy fahampian'ny toeram-ponenana na ny fianakaviana manana fifandraisana marefo. Raha mampiasa ny refin'ny fahantrana fotsiny isika mba hisokajiana ny fianakaviana, dia mety hisy voka-dratsiny izany, ka ireo izay ambanin'ny refin'ny fahantrana dia mahazo fanaraha-maso, raha toa kosa ka voahilika ny sasany izay tena mahantra fadiranovana.
Fa niady hevitra kosa anefa i Kirsten Han ny amin'ny maha zava-dehibe ny fametrahana refin'ny fahantrana:
Tsy midika anefa ny fisian'ny refin'ny fahantrana fa any amin'ireo izay voakasik'izany ny fifantohana rehetra no hiompana. Ny fametrahana ny refin'ny fahantrana amin'ny fomba ofisialy dia mampiseho mibaribary ny faneken'ny governemanta ny maha olana goavana ny fahantrana izay mandrafitra ny fiaraha-monina. Vantany vao hitantsika fa olana ara-drafitra ny fahantrana, dia maro ireo dingana tokony hirosoana amin'ny fizaràna ny harena sy asa rehetra. Tsy midika akory ny fandavana ny famaritana ny fahantrana hoe tsy misy olona mahantra mihitsy; midika fotsiny izany fa tsy mbola fantatsika tsara hoe inona no tokony atao.
Miampanga ny governemanta ny Blogging for Myself noho ny fametrahany tombana diso ny amin'izay tena zava-dehibe:
Tsy marina ny filazana fa tsy misy valiny ny fanampiana ny mahantra. Fanomezana hasiny ny maha-olombelona izany sady fanolorana ho avy ho antsika ihany koa. Tsy azo refesina sy vidiam-bola ny lanjan'izany…
Manana lanja diso toerana ny governemanta. Tsy nikely soroka tamin'ny ara-to-karena sy ny foto-drafitr'asa izy ireo ka zary nampahantra ny fianarana ny maha-olona sy ny fiaraha-monina ary tsy lazaina intsony ny momba ny fiainam-panahy sy ny fikelezan'aina ny amin'ny fanahintsika.
Nanantitrantitra i Nomad fa tsy feno ny fandraisana fepetra momba ny GDP raha tsy faritana ny fahantrana ao amin'ny firenena iray:
Miara-dàlana amin'ny GDP ny refin'ny fahantrana mba hamantarana hoe manao ahoana tokoa ny fampandehan-draharahan'ny governemanta eto amin'ny firenena, tsy tokony handeha ila ireo.
Amin'ny fomba ahoana no hisakanana ireo tena olom-pirenena sasany ho any ivelan'ilay refy amin'ny alalan'ny fandrafetana ny salan'isa faritan'ny refin'ny fahantrana? Aiza e? Ny olona no mampandeha ireo sampan-draharaha ara-tsosialy fa tsy “robots” akory. Tsy afaka ny hanampy ireo tranga tena izy ve izany ianao satria ambanin'ilay fari-piainana voafaritra izy ireo ka ny hany sisa azonao atao dia ny mijanona fotsiny eo amin'ilay refy, izay ve no tianao ho lazaina?
Namelabelatra ny ny fahantran'ny salan'isan'ireo mahantra ao Singapour i Belmont Lay:
Mety ho lasa fanafintohinana ho an'olona ny filazanao aminy fa misy fahantrana ao Singapour. Kanefa fantatrao, ary fantatro fa misy eran-tany ny fahantrana ary tsy lavitr'izany velively i Singapour. Fa ny tena manafintohina dia ny fahantran'ny salan'isan'ny olo-mahantra ao Singapour. Firenena iray malaza ho mpamariparitra amin'ny zavatra rehetra i Sngapour. Kanefa very hevitra tanteraka isika rehefa tonga ny fotoana hamaritana ny refin'ireo mahantra, na ireo mahantrahantra ihany, ireo antonontonony.